Vasikana vazhinji vanotambura nekukura kwakanyanya kwebvudzi pakati peye tsiye. Muzviitiko zvisingawanzoitika, dambudziko rakadai rinoratidza chakakomba hutano hutano, semuenzaniso, polycystic ovary chirwere. Asi, sekutonga, izvi zvinokonzererwa kune genetiki chinhu. Kuti ubvise iri dambudziko kwenguva pfupi, zvigunwe, zvidimbu zvewakisi kana mafuta ekudzora anouya kuzonunura. Kuti ubvise bvudzi rakazara, funga kubviswa kwemagetsi emagetsi kana kubviswa kwebvudzi.
Cellulite inogona kukundwa here?
Mukadzi haadi kuona ganda reorenji kana gorosi rakakora panzvimbo pemagaro ake. Nehurombo, cellulite haizive tsitsi kune chero munhu. Ganda rinova risinganyanyoyevedza uye risina kuenzana uye rine bundu.
Chinonyanya kushanda chekudzivirira uye chekurapa chiyero nguva dzose kurovedza muviri. Uye mafuta akashambadzirwa nemafuta kazhinji haabatsire. Kune maitirwo akaita sa mesotherapy, anti-cellulite massage, kuputira muviri.
Nei ndiri kutsvuka?
Kune vazhinji vedu, kutsvuka kwakabatana zvisingaite nemitezo yemuviri wedu kuzvinhu zvakasiyana zvakatipoteredza, sekutsvaira kunyara kana kunyadziswa. Asi, kana ganda rikafukidzwa nemavara pahuma, matama kana chin, ipapo zvinokwanisika rosacea... Icho chirwere chisingaperi cheganda uye chinorapwa nemapiritsi kana mafuta.
Nei bvudzi rakachinja kuchena mangwanani?
Kana iwe uri mudiki uye hafu yebvudzi rako ratochena, iwe unofanirwa kuve wakangwarira. Muzviitiko zvakawanda, kuchena kwekutanga kunoratidza kusashanda kweiyo thyroid gland kana kuti pigmentation.
Chikonzero chakajairika kuberekwa. Neraki, bvudzi rakachena pazera diki hazvireve kuti muviri wako wakura kupfuura vamwe.
Iko acne iri pazvidya zvangu iri kubva kupi?
Ichi chirema cheganda chinonzi follicular keratosis. Aya mamiriro eganda haakuvadzi, asi haanyanyoyevedza. Zviratidzo zvekeratosis zvinoitika pazvidya, musana nepamberi. Ichi chirwere, sekutonga, chinogara kwenguva refu, uye chinonyangarika nezera re30-35. Kusvikira panguva iyoyo, zvinokwanisika kudzikisa kuratidzwa kwechirwere nerubatsiro rwechigadzirwa chinonyorovesa.
Ndezvipi zvinotambanudza zvinobva?
Kana ganda redu rikaita kutambanuka kwakawanda panguva yekurema kana kana, nekusiyana, kurasikirwa kwayo kwakasimba, panguva yepamuviri, zvinyama zvinyoro zvinogona kuumba, kana sezvavanodaidzwa kuti "kutambanudza mamaki". Pakutanga, vara ravo rakatsvuka, asi zvishoma nezvishoma rinozoita chena.
Kazhinji kazhinji, anotambanudza mamaki anoonekwa mumagaro, zvidya, zasi kumashure, dumbu uye chipfuva. Kuzvibvisa hazvigoneke, asi unogona kuzviita kuti zvisaonekwe - nerubatsiro rwekuvhiya kana peeling yemakemikari. Mhando dzose dzemafuta uye mafuta anowanzo shaya basa.
Sei mweya wakashata uchioneka?
Mushure mekugeza mazino ako mazuva ese, uchishandisa yakakosha mazino floss, mweya wakashata uchiri kushanda here? Iwe unogona kunge uine chirwere chemagum, mukanwa wakaoma, uye hutachiona hwechivi. Asi sezvingabvira, iwe uchafanirwa kuchinja dhayeti yako. Hapana kana imwe chete, kunyangwe iyo yakashongedzwa inodhura mushonga wemazino inobatsira kukunda kunhuwa kunoramba kuripo kwehanyanisi kana gariki.
Laser peeling: ongororo
Biorevitalization kana mesotherapy: izvo zviri nani
Tambanudza mamaki kumashure: kunzwisisa zvikonzero
Keratolytic zvinodhaka: mazita uye nzira dzekushandisa
Periodontitis kuiswa, zvinokonzeresa, kuongororwa, kurapwa
Posted in Runako uye Utano
Mibvunzo ye59 mu database yakagadzirwa mu 0,434 masekondi.